Steam Play သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Proton ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် | Linux မှ
Steam Play သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Proton ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်အသစ်ပြောင်းသည်
Steam Play ကိုအဆင့်မြှင့်ထားသည်။ ဗားရှင်း ကစားနည်း 4.2-8 အပြင်ထွက် GNU / Linux လောကသို့ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်ဤ Valve ဝန်ဆောင်မှု၏ဖောက်သည်သည်၎င်း၏တိုးတက်မှုနောက်သို့လိုက်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသစ်သည် DXVK ၁.၂.၃ စီမံကိန်းဖြစ်သော DirectX ဗီဒီယိုဂိမ်းညွှန်ကြားချက်များကို Vulkan သို့ဘာသာပြန်ရန်နှင့် Wine နှင့်အသုံးပြုရန်နှင့် Linux ပေါ်တွင်ဇာတိ ၀ င်းဒိုးဂိမ်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ထည့်သွင်းထားသောဗားရှင်းအသစ်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Valve ၏ကြီးမားသောအကြံဥာဏ်နှင့် ပရိုတွန်စီမံကိန်း ၎င်းသည်အကျိုးအမြတ်များစေပြီး Linux သုံးစွဲသူများသည် ၀ င်းဒိုးပေါ်မမူဘဲမိမိတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုကစားနိုင်သည်။ ယခု Microsoft စနစ်၏မူလခေါင်းစဉ်များကိုမည်သည့်အတားအဆီးမှမပါဘဲ Steam Play မှတစ်ဆင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအသစ်ဖြန့်ချိခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအားလုံးကိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ ...
Steam Play တွင်ပါဝင်သည် အရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲများ အဖြစ်:
Steam Client ကို သုံး၍ embedded browser တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြintegrနာအချို့ကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဥပမာ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Manager ကို 2019.
ပြproblemsနာများကိုပြုပြင်ခြင်း Bloodstained: အည၏ထုံးတမ်း နှင့်အလုပ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အမှားသတင်းစကားပစ်သောအခြားဗီဒီယိုဂိမ်းများ။
နောက်ဆုံးထွက် 4.9.0 မှစပျစ်ရည်ကို mono အရာ winforms ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။ ဒါက Mono ကိုအခြေခံထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အားလုံးကိုကူညီလိမ့်မယ်။
အမျိုးမျိုးသောပြproblemsနာများ ဝင်းဒိုးမန်နေဂျာများ နှင့် alt-tab ကိုတညျ့။
steering ဘီးများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် Fixes တုံ့ပြန်ချက်စနစ်အား.
ဒါ့အပြင်အတူ အသစ် DXVK Unreal Engine4ဂိမ်းအင်ဂျင်နှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများ၊ World of Warships နှင့်အခြားခေါင်းစဉ်များမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ CPU overhead၊ GPU နှင့် memory optimization များကိုလျှော့ချသည်။
ဒီတော့မင်းရပါလိမ့်မယ် နည်းပါးလာပြproblemsနာများနှင့်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ ... ဒီအဆင့်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ၊ တိုးတက်မှုများစွာထပ်မံပေါ်ထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Linux ကစားနည်းကမ္ဘာကထိုက်တန်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Steam Play သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Proton ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်အသစ်ပြောင်းသည်
Raspberry Pi OS ကို Raspberry Pi4ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
Linus Torvalds သည် CoC ပြီးနောက်ကွဲပြားသည်။ သို့သော်သူပြန်လာပြီ။